बुढिगण्डकीमा ९ अर्ब भष्ट्राचार भएको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेसको निसानामा डा. भट्टराई - Vishwanews.com
बुढिगण्डकीमा ९ अर्ब भष्ट्राचार भएको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेसको निसानामा डा. भट्टराई
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढिगण्डकी जलविद्यूत आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब रुपैयाँ बाँडेर खाएको अभिव्यक्ति दिएपछि उनीविरुद्ध कांग्रेसले निसाना बनाएको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण ल्याउन डा. भट्टराईलाई चुनौती समेत दिएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा समेतको नाम भष्ट्राचारमा मुछिदिएपछि कांग्रेस आक्रोसित बनेको हो ।
गोरखामा बाबुराम भट्टराई कांग्रेसकै भोटको बलमा विजयी भएका हुन् । अहिले सभापति शेरबहादुर देउवा समेतको नाम भष्ट्राचारमा मुछिदिएपछि कांग्रेस आक्रासित बनेको हो । डा. भट्टराईले भने गोरखौ पुगेर उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसका लागि आफुसँग पर्याप्त प्रमाण समेत रहेको उनको भनाई थियो । कांग्रेसले भने विज्ञप्ती निकालेरै भट्टराईको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेको छ । नेकपा भने यसमा मौन छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका हुन् । आवेगको भरमा गर्ने टिप्पणीले क्षणिक लाभ दिए पनि सम्बन्धित व्यक्तिको ओज र राजनीतिको गरिमा नबढ्ने भन्दै उनले त्यसको हेक्का राख्न आग्रह गरेका छन् ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गरेर स्वदेशी पुूँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने क्षमता र अवसरको विकास गर्ने नमुना बुढिगण्डकी बन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । कांग्रेसले उक्त प्रतिवेदन कहाँ थन्काइएको भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ ।
विदेशी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पने तयारी भित्रको नियत के हो भन्दै उसले डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बुढिगण्डकीका लागि उठाइंदै आएको अर्बौंको रकमको स्थिति समेत सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।